Samsung Galaxy S10 | Gam akporosis
Samsung Galaxy S10 bụzi gọọmentị: ihe ọ bụla ịchọrọ ịma na vidiyo
Thatbọchị nke ọtụtụ tụrụ anya ya, ọkachasị ndị na-eguzosi ike n'ihe nke ụlọ ọrụ Samsung. Mgbe ọtụtụ ọnwa nke asịrị na leaks, Samsung eweputala ọkwa ọhụrụ nke Galaxy S10, a nso nke mejupụtara atọ, S10e bụ ngwaọrụ ntinye na njedebe dị elu nke na-anọchi anya Samsung S.
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, ọnụ ọgụgụ asịrị metụtara Galaxy S10 amụbawo nke ukwuu, na-enye anyị ohere ịnweta echiche doro anya banyere ụdị S10 ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Korea gosipụtara na nkeji ole na ole gara aga. Ma n'ezie, ha bụ asịrị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe niile Nkọwapụta Galaxy S10, ọnụahịa na atụmatụ anyị ga-egosi gị ya n’okpuru.
1 Samsung ekwughi ee na ọkwa ahụ
2 Mkpịsị aka mmetụta n'okpuru ihuenyo
3 Igwefoto igwefoto atọ na-abịakwute S10
4 Ikike ichebe
5 Batrị maka ụbọchị niile na ndị ọzọ
6 Ahịa na nnweta nke Samsung Galaxy S10
Samsung ekwughi ee na ọkwa ahụ
Samsung bụ otu n'ime ndị nrụpụta ole ma ole eguzogidela ọchịchọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nrụpụta niile i toomi ọkwa ahụ nke sitere n'aka iPhone X, ọhụụ na gam akporo echeghị ọganihu ọ bụla nke mejupụtara teknụzụ dị mkpa iji nwee ike ịmepe ngwaọrụ site na teknụzụ yiri nke ID ID, nke bụ naanị nzube nke nkuanya ahụ na elu ihuenyo ihuenyo, dịka ọ nwere ihe mmetụta dị iche iche na kamera dị iche iche.
Samsung ahọrọla ịmepụta sistemụ ihuenyo niile, imepụta ụdị agwaetiti bụ ihuenyo itinye igwefoto / s n'ihu yana ụdị ihuenyo ọzọ nwere ụdị anya mmiri na akụkụ nke elu. LỌhụrụ S10 dị iche iche na-enye anyị nhazi ihuenyo na agwaetiti, ebe igwefoto / s di na enye ihe onodu ogwugwu kariri ma oburu na ejiri otutu ihe.
Ihuenyo nke ihe nlereanya bụ isi, Galaxy S10e, na-enye anyị akara nke 5,8 sentimita asatọ, ebe Galaxy S10 na S10 + jikọtara 6,1 na 6,4-inch mechie ihuenyo. Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na Samsung bụ isi na-emepụta OLED meziri n'ahịa, anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na ngebichi ndị a kachasị mma na ahịa ekwentị, na-enye anyị doro anya ma na-agba agba nke anyị na-enweghị ike ịchọta na ọdụ ndị ọzọ.
Mkpịsị aka mmetụta n'okpuru ihuenyo
Agbanyeghị na ndị ọrụ Samsung gaara egbu oge karịa, Galaxy S10 nso na-enye ndị ahụ Ultrasonic mkpisiaka ihe mmetụta n'okpuru ihuenyo, nke mere na anyị nwere ike ịmeghe ọnụ ya ozugbo site na imetụ akụkụ ọ bụla nke ihuenyo ahụ ọsọ ọsọ yiri nke ahụ dị na ihe mmetụta dị na azụ nke ngwaọrụ ahụ. Na mgbakwunye, n'adịghị ka ihe nyocha anya, ultrasonic na-arụ ọrụ ọbụlagodi na anyị nọ gburugburu mmiri.
Na mgbakwunye na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, Samsung na-aga n'ihu ịkụ nzọ iris ude usoro, sistemụ na-anaghị enye anyị otu nchekwa nke teknụzụ njirimara 3D nwere ike inye anyị, dị ka nke Apple ID na-enye, mana nke ahụ enweela ọganiihu n'etiti ụmụazụ ụlọ ọrụ ahụ.
Igwefoto igwefoto atọ na-abịakwute S10
Dị ka ndị maara banyere foto si kwuo, ka igwefoto na-ejikọ ngwa ngwa agagharị, nke ka mma. Ọ ka mma, ọ bụrụhaala na sọftụwia na-akwado ya nke nwere ike ijikọ ọnụ na ịhazi ihe ndị kamera ọ bụla mere. N'echiche a, Samsung na-eji ọgụgụ isi ọgụgụ isi rụpụta ezigbo nsonaazụ.
Tanto Galaxy S10 na Galaxy S10 + na-enye anyị ese foto atọ na azụ, igwefoto atọ nke nzube ha dị iche: telephoto, obosara sara mbara na oke obosara, nke anyị nwere na anyị nwere ntụgharị nke anyị na-enweghị ike ịchọta na ọdụ ndị ọzọ na-eji naanị igwefoto abụọ.
Dịka m kwuru n'elu, Samsung ejirila Infinity O ihuenyo, ihuenyo nke na-enye agwaetiti ma ọ bụ ịkpọpu akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. Galaxy S10e na Galaxy S10 jikọtara otu igwefoto n'ihu, ebe Galaxy S10 + jikọtara igwefoto abụọ, otu n'ime ha nwere omimi RGB nke ga-enye anyị ohere ịme onwe anyị ma mee ka ndabere nke selfies anyị were. Na mgbakwunye, ọ na - enye anyị ohere itinye usoro nzacha tupu ịse foto iji hụ ihe nsonaazụ ga - abụ.
Ọzọkwa, na dịka ọ dị na nkwekọrịta ọ mechiri na Samsung, Galaxy S10 ga-abụ ọnụ ụzọ mbụ iji rute ahịa na Qualcomm processor kachasị ọhụrụ, Snapdragon 855, n'agbanyeghị Ọ ga-eme nke a naanị na mba ndị a na-ahụkarị dịka United States, Latin America na Asia.
Mba ndị ọzọ, gụnyere Europe niile, anyị ga-edozi maka ya Exynos 9820, processor na ọgbọ ọ bụla ọ bụla, na-abawanye arụmọrụ ya, na-adịkarị ọtụtụ na nke Qualcomm Snapdragon nyere.
The Galaxy S10e dị na otu ụdị nke 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa.
Versiondị nke etiti, Galaxy S10, iji kpoo, dị na ụdị abụọ nke 128 na 512 GB nke nchekwa, tinyere 6 na 8 GB nke RAM n'otu n'otu.
Modeldị kachasị elu na nso nso a, Galaxy S10 + dị na nsụgharị atọ. Versiondị nwere 8 GB nke RAM na 128 GB nke nchekwa, ọzọ nwere 8 GB nke RAM na 512 GB nke nchekwa na ụdị kachasị ọnụ, nke na-enye anyị 12 GB nke Ram na 1 TB nchekwa.
Ọ bụghị nsụgharị niile dị site taa, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhọrọ ụdị a kapịrị ọnụ, anyị ga-echere ka nnweta gbasaa.
Batrị maka ụbọchị niile na ndị ọzọ
Batrị na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime nsogbu kasịnụ maka smartphones taa. Ọ bụrụhaala na Google na Apple anaghị elekwasị anya na melite njiri akụ nke sistemụ arụmọrụ ha, anyị ga-amanye ka anyị ama anyị kwa ụbọchị. Galaxy S10e na-enye anyị batrị 3.100 mAh, ebe Galaxy S10 na Galaxy S10 + na-enye anyị batrị 3.400 mAh na batrị 4.100 mAh n'otu n'otu.
Otu n'ime ihe ndị enyere na Galaxy S10 na S10 + dị na gbanwee usoro nchaji site na protocol Qi, nke na-enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ ekwentị ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla kwekọrọ na sistemụ a na-akwụ ụgwọ, ọrụ dị mma maka mgbe anyị hapụrụ ụlọ ma ghọta na anyị agbaala ekweisi ma ọ bụ na ekwentị onye ọlụlụ na-enweghị batrị tupu ịla n'iyi na ụlọ ahịa kwekọrọ.
Ahịa na nnweta nke Samsung Galaxy S10
Modelsdị ọhụrụ atọ ahụ bụ akụkụ nke Galaxy S10 ga-aga ahịa na March 8, mana site ugbu a gaa n'ihu anyị nwere ike idobe ya na weebụsaịtị. Ọnụahịa nke onye ọ bụla na ụdị ọ bụla dị na Galaxy S10 nso ka akọwapụtara n'okpuru:
Samsung Galaxy S10e - 6 GB Ram na 128 GB nchekwa: 759 euro
Samsung Galaxy S10 - 6 GB Ram na 128 GB nchekwa: 909 euro
Samsung Galaxy S10 + - 8 GB Ram na 512 GB nchekwa: 1.259 euro
Samsung Galaxy S10 + - 12 GB Ram na 1 TB nchekwa: 1.609 euro.
Maka ndị ọrụ ahụ debere Samsung Galaxy S10 ma ọ bụ S10 +, ha ga-enwe ike nweta Galaxy Buds na ọcha maka n'efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Samsung Galaxy S10 bụzi gọọmentị: ihe ọ bụla ịchọrọ ịma na vidiyo
Pocophone F1 ga-enye gị ohere igwu egwu ọdịnaya Netflix